“Komishanku Wuxuu Caddeynayaa in Aanay Jirin wax Xog ah oo Laga Xaday ama la Masaxay” |
Hargaysa (GNN)-Komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa beeniyay war uu Sabtidii toddobaadkan baahiyay wargeyska FOORE, oo sheegayay in la xaday ama la waayay xogtii diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee gobollada dalka laga qabtay.Waxaanay sheegeen komishanka doorashooyinku in aanay jirin haba yaraatee wax xog ah oo laga xaday ama ka luntay oo la waayay, isla markaana wararkaasi ay yihiin been aanay waxba ka jirin. Iyadoo ay tilmaameen in ay sharciga horgayn doonaan wargeyskii warkaasi daabacay.
Xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland oo shalay shir jaraa’id ku qabtay xaruntoodda magaaladda Hargaysa, waxay cadeeyeen in aanay jirin xog la xaday, isla markaana aan la masixi Karin, lana xadi Karin xogta diiwaangelinta codbixiyeyaasha.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka C/qaadir Iimaan Warsame, oo shirkaasi jaraa’id ka hadlay ayaa sheegay in aanay jirin cid ka mid shaqaalaha komishanka doorashooyinka oo loo tuhunsan yahay in ay ku kacday fal ah in la masaxay xogta diiwaangelinta “Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu cadaynayaa in aanay jirin wax xog ah oo ka luntay komishanka doorashooyinka qaranka, ama laga xaday ama la masaxay, haba yaraatee ma jirto.
Xogtaasi waa xog qaranku leeyahay, waxaana gacanta ku haya komishanka doorashooyinka qaranka, waana xog xafidan.”
Dhinaca kale komishanka doorashooyinku waxay sheegeen in ay sharciga la tiigsan doonaan wargeyska madaxa banaan ee FOORE oo ka soo baxa magaaladda Hargaysa, kaasi oo cadadkiisii Sabtidii doraad daabacay war sheegayay in la xaday xogtii diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee komishanka doorashooyinka.